Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Medical, Nursing, Pharmacy အလုပ်အကိုင်များ
ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု Jobs in Myanmar
ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု အလုပ် 11 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူ | Medical Assistant
• လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများအား နားလည်ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူျဖစ္ရမည္ • အပ်ထည်ပစ္စည်းများအား အရည်သွေးကောင်းမွန်စွာြဖင့် ၊ အလေအလွင့်အပျက်အစီးမရှိအချိန်မှီ ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သူျဖစ္ရမည္ • စကားအပြောအဆို ချိုသာ၍ စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်သူျဖစ္ရမည္ • ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း ကောင်းမွန်သင့်မြတ်စွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်သူျဖစ္ရမည္
- ဆေးဝါးများကို ဆေးညွှန်းများအတိုင်းပြင်ဆင်ပြီး အချိန်မီ ပို့ဆောင်ပေးရမည်။ - ဌာန၏ ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းများကို ဌာနမှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းအတိုင်း ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အလွယ်တကူရှာဖွေအသုံးပြုနိုင်ရန် ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ - ဆေးညွှန်းအချက်အလက်များ မပြည့်စုံပါက မေးမြန်းခြင်း နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်း အတိုကောက်များကို ဘာသာပြန်ရန်တာဝန်ယူရမည်။ - လုပ်ငန်း၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ရောင်းအားကောင်းစေရန် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်ရမည်။ - Reviewing customer or client accounts, following up on customers’ needs and requirements on medications. - Handling prescription requests and validations inatimely manner is given priority. - Performing order confirmation and payment verification. - Cold-calling and explaining to customers about various medications' benefits. - Any other ad hoc duties that may be assigned
- Customer များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သူ။ - Microsoft office Application များကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ရမည်။ - English ဘာသာစကား ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူ ၊ Teamwork Skill ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - အပြုသဘောဆောင်သော စိတ်ထားနှင့် တစ်ကိုယ်ရေ သန့်စင်မှုရှိသူဖြစ်ရမည်။
ဝယ်ယူသူများအား လိုင်စင်ရ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူ၏ လမ်းညွှန်မူဖြင့် ဆေးညွှန်ဆေးနှင့် ဆေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား ဖြန့် ဝေ ရောင်းချရန်။ ဝယ်ယူသူများအား ဆေးညွှန်စာများတွင်ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များအား လမ်းညွှန် ရှင်းပြပေးရန်။ ဝယ်ယူသူများအား ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူ၏ လမ်းညွှန်မူဖြင့် အပိုဆေးဝါးများကို လမ်းညွှန် ရှင်းပြ ပေးရန်။
အကျိုးအမြတ်: အချိန်ပို လစာ။ ကျန်းမာရေး အာမခံ။
• မျက်စိဆေးရုံ /ဆေးခန်းအတွေအကြုံရှိသူ များအား လစာနှင့် အခြားခံစားခွင့်များပိုပေးမည် • စကားအပြောအဆို ချိုသာ၍ လူနာများအပေါ် စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်သူ • ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း ကောင်းမွန်သင့်မြတ်စွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်သူ • ဆေးရုံဆေးခန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ဖူးသောအတွေ့အကြုံရှိသူျဖစ္ရမည္
-သူနာပြု ဆရာမ များ/ medical staff များနှင့် အတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည် -လူနာအတွက် နေ့စဉ် လိုအပ်ချက်များကို ဆောင် ရွက်ပေးရမည် -လူနာရဲ့ medical history များကို တိကျမှန်ကန်စွာ record လုပ်နိုင်ရမည် -Assisting with feed/meal time အကူအညီ (သို့မဟုတ်) ကုသမှုအတွက် လူနာထံမှ ခေါ်ဆိုမှုများကို ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို အသိပေးနိုင်ရမည်။ -Assisting with mobility issues
- စကားပြောယဥ်ကျေးချိုသာ၍ သွက်လတ်ချက်ချာသူ - ကွန်ပျူတာအခြေခံအသုံးပြုနိူင်၍ ခေါင်းဆောင်လိုစိတ်ရှိသူ - ရေရှည်လက်တွဲလုပ်နိူင်ပြီး အရောင်းပိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်အပြည့်ရှိသူ - ဆိုင်ခွဲများတွင် အလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်သူ